अभावले निर्माण गरेको सातु उद्योग – Nepal Japan
आधुनिकतामा रमाइरहेको समाजलाई सातुको महत्व बुझाउन गाह्रो
– किरण पौड्याल २१ बैशाख १२:२७
सातु, केही दशकअघिसम्म बालबालिका, युवा, वृद्धवृद्धा सबैको प्रिय खाजा थियो । स्वास्थ्यका दष्टिकाणले पनि निकै राम्रो सातु आजभोलि पाउन मुस्किल पर्छ । आधुनिकतामा रमाइरहेको समाजलाई सातुको महत्व बुझाउन गाह्रो छ । ग्रामीण भेगमा प्रयोग हुने सातुलाई शहरी क्षेत्रका वासिन्दाले त्यति रुचाउँदैनन् । किनभने उनीहरु आधुनिकताका नाममा तयारी खानेकुरामा रमाउने गर्दछन् ।
तर, इलामको माइजोगमाई गाउँपालिकाका जीतेन्द्र अधिकारी अहिले सातु उद्योगबाट सन्तुष्ट छन् र यसलाई अरु विस्तार गर्ने योजनामा छन् । धेरै क्षेत्रमा हात हालेकाा उनलाई आफूले गरेको कामबाट सन्तुष्टि मिलेन । कहिले कता, कहिले कता । न काम गरेअनुसार कमाइ हुन्छ, न सन्तुष्टि । शुरुमा ठेक्कापट्टाको काम गर्नुभयो । कमाइ हुनु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै खर्च । एउटा सीमित घेरामा बसेर काम गर्न जीतेन्द्रको चित्त बुझेन ।
बालबालिकाहरूले विद्यालयहरूमा खाजा लाने वस्तुका बारेमा हरेक परिवारमा चिन्ता हुने गर्दथ्यो । विद्यार्थीले खाजाका नाममा बाबुआमासँग दिनहुँ रकम मागेको देख्नुहुन्थ्यो । जति पैसा दिएपनि उनीहरूको चित्त बुझ्दैन थियो । उहाँलाई लाग्थ्यो, “एकातिर पैसाको नाश, अर्कातिर तयारी खाजाले गर्दा स्वास्थ्यमा खराब ।” बजारका तयारी खानपानमा बालबच्चा झुम्मिएका देख्दा उहाँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । यत्तिकैमा उहाँले सोच्नु भयो, विद्यार्थीका लागि केही अर्गानिक खाजा बनाउने । के बनाउने ? कसरी बनाउने ? अनेक प्रश्न उठे ।
जीतेन्द्रले आफू मात्रैले यो कुरा गर्न चाहनु भएन । माइजू नाता पर्ने सेवी राईलाई पनि यसबारे कुरा राख्नुभयो । राईले पनि जीतेन्द्रको कुरालाई स्वीकार्नु भयो । जीतेन्द्र र सेवी मिलेर उद्योग खोल्ने निर्णयमा पुग्नुभयो । उद्योग खोल्ने कुरा सजिलो थिएन । न उद्योगको ज्ञान, न बजारको जानकारी, सबै कुरामा दुबै जना अनभिज्ञ थिए । तैपनि उहाँहरू यसैमा डटेर लाग्नुभयो ।
उहाँहरूले सातु उद्योग खोल्नुभयो । उद्योगमा मकै मात्र होइन गहुँ, कोदो, चना, भटमास, बदाम, जौ मिश्रित बनाउन थालियो । शुरुमा पाँच लाख रूपैयाँको लगानीमा व्यवसाय शुरु भयो । शुरुआतमा सातुले खासै बजार लिन सकेन । तैपनि हिम्मत हार्नुभएन, गरिरहनुभयो ।
अहिले उद्योगमा जीतेन्द्रले अर्का एक जनालाई पनि रोजगारी दिनुभएको छ । शनिबार, शुक्रबार श्रीमती र छोरीहरूले पनि सहयोग गर्छन् । पारिवारिक सहकार्यमै उद्योग चलेको छ । उद्योगको काम झन्झटिलो छ तर जीतेन्द्र झन्झटिलो मान्नु हुन्न । परिश्रमले काम गरेर खानुपर्छ भन्ने बुझेका जीतेन्द्र निरन्तर खटेर सातु बनाउनुहुन्छ । सबै खाद्यवस्तु मेसिनमा हाल्नु अघि भुट्नु पर्छ । भुट्नका लागि आधुनिक सामग्री छैनन् । पराम्परागत होल्र्याङ्गे (मकै भुट्ने विशेष किसिमको टिनबाट बनाइएको सामग्री) प्रयोग गर्नुपर्छ ।
जीतेन्द्रको बसाइ इलाम नगरपालिका¬७ धोवीधारामा छ भने उद्योग नगरपालिका¬८ मा रहेको छ । उद्योगबाट मासिक रु २० हजार हाराहारीमा नाफा हुने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘‘मुनाफा धेरै नभएपनि आफैँ मालिक, आफैँ श्रमिक भएर काम गर्दाको आनन्द नै ठूलो छ’’, उहाँ भन्नुहुन्छ । उद्योगका लागि मासिक रु दुई हजार घर भाडा बुझाउनुपर्छ ।
विस्तारै सदरमुकामलगायत फिक्कल बजार, झापाको धुलाबारी बजारसम्म सातु पुग्न थालेको छ । अहिले उद्योगको बजारसँगै लगानी पनि बढेको छ । झण्डै रु १० लाख लगानी पुगेको उहाँ बताउनुहुन्छ । भविष्यमा आफ्नो व्यवसायले विस्तारै बजार पाउनेमा उहाँ विस्वस्त हुनुहुन्छ ।